VaMatombo naVaChibebe Voramba Vari muHusungwa
Chivabvu 09, 2008
Magweta emutungamiri weZCTU, VaLovemore Matombo, pamwe nemunyori wesangano iri, VaWellington Chibebe, vakwidza nyaya yekusungwa kwevaviri ava kumatare edzimhosva epamusoro.
Magweta aya ari kuda kuti nyaya yavari kupomerwa ipinde mudare nechimbichimbi, kana kuti vaburitswe muhusungwa. VaMatombo naVaChibebe vakasungwa neChina zviri pamutemo vachipomerwa mhosva yekutaura manyepo pazuva rekucherechedza zuva revashandi.
Ukuwo mupepeti wenhau we The Standard, VaDavidson Maruziva, avo vakasungwa neChina vachipomwerwa mhosva yekuburitsa manyepo, vapihwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita mabhiriyoni gumi emadhora.
Vanziwo vadzoke kudare musi wa 23 Chivabvu.
Ukuwo gweta remutori wenhau anoshanda akazvimirira, VaFrank Chikowore, VaHarrison Nkomo, avo vari kupomerwa mhsova yekunyomba VaMugabe, vapihwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso, kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo.
Patience Rusere weStudio Seven aita hurukuro negweta raVaChibebe naVaMatombo, VaCharles Kwaramba, kuti tinzwe kuti seyi vaendesa nyaya yavo kumatare edzimhosva makuru.